Mobile Phone Backlight Part2- MPPG
Home / Hardware Tutorial / Mobile Phone Backlight Part 2
Soe Myat Thu March 6, 2016	Hardware Tutorial 1,788 Views
အလုပ်လုပ်ပုံ အကြမ်းဖျင်းသိပြီဆိုရင် Switching IC အကြောင်း ဆက်ကြရအောင်။ ပင်ငုတ်တခုခြင်း ပြောပါ့မယ်။
Switching IC – U1301
1.VIN – အပေါင်းဗို့ ပေးသွင်းလမ်းကြောင်း
IC အတွင်းက switching ပိုင်းကို ခုတ်မောင်းပေးမယ့် လှိုင်းထုတ်အပိုင်း (Oscillator) အတွက် ပေးသွင်းဗို့ပါ။ MTK ဖုန်းတွေမှာ ဘက်ထရီငုတ်လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ VBAT ကပေးသွင်းပြီး Qualcomm ဖုန်းတွေမှာတော့ FET ရဲ့ Source လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ VPH PWR ကတဆင့် ပေးသွင်းတတ်ပါတယ်။ 3.7V ဘက်ထရီတတ်ထားပြီး ပါဝါမနှိုးခင် VIN ငုတ်လမ်းကြောင်းမှာ Ground ချထားတဲ့ Condenser ကို ဗို့တိုင်းကြည့်ပါ။ MTK ဖုန်းမှာ 3.7V ရှိနေပြီး Qualcomm ဖုန်းမှာ 3.2V ဝန်းကျင် ရှိပါလိမ့်မယ်။
2.EN (Enable) – IC ကို နှိုးသောလမ်းကြောင်း
IC ကို 3.7V ပေးသွင်းထားပေမယ့် IC အတွင်းက လှိုင်းထုတ်ပိုင်း (OSC) အလုပ်မလုပ်သေးရင် Switching မခုတ်သေးတဲ့အတွက် ဗို့မြင့် မထွက်သေးပါဘူး။ ဗို့မြင့်ထွက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ LCD မှာ အရုပ်ပေါ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ CPU ကတဆင့် EN လမ်းကြောင်းနဲ့ OSC ပိုင်းကို လှမ်းနှိုးလိုက်ပါတယ်။ OSC နိုးမှ ဗို့မြင့်ထွက်ပါမယ်။ ဗို့မြင့်ထုတ်ဖို့ မလိုတော့ရင်(display ပိတ်သွားရင်) EN လမ်းကြောင်းကို ပြန်ပိတ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
3.PWM (Pulse Width Modulation) ခုန်လှိုင်းပြောင်းပေးခြင်း
LCD ရဲ့ အလင်းအမှောင် (brightness) ချိန်ညှိတာဟာ LED လေးတွေရဲ့ အလင်းရောင် အနည်းအများကို ချိန်ညှိတာပါပဲ။ LED လေးတွေ မှိန်သွားရင် brightness ကျသွားပြီး လင်းလာရင် brightness တက်လာတာပါပဲ။ IC အတွင်းထဲက လှိုင်းထုတ်ပေးတဲ့ OSC ပိုင်းရဲ့ ခုန်လှိုင်းကို ချိန်ညှိလိုက်ရင် switch time ပြောင်းသွားတာကြောင့် ဗို့မြင့်အထွက်မှာလဲ လိုက်ပြောင်းသွားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် PWM လမ်းကြောင်းကို CTRL (Control) လို့လဲ ခေါ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလမ်းကြောင်းကို တချို့ဖုန်းတွေမှာ LCD ကတဆင့် ပြန်ပေးတာရှိသလို ဒီဖုန်းထဲမှာတော့ CPU ကနေ တိုက်ရိုက် ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ပေးပါတယ်။
4. COMB – Loop Compensation
R + C နဲ့ Loop ကို တည်ငြိမ်စေဖို့အတွက် သုံးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာ C တလုံးနဲ့ Ground ချထားပါတယ်။
5. SW – Switching
IC အတွင်းပိုင်းထဲက ခလုတ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ FET လေးရဲ့ Source ငုတ်နဲ့ ဆက်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းပါ။ FET ရဲ့ Drain ငုတ်ကို Ground နဲ့ ဆက်ထားတဲ့အတွက် FET Gate တခါပွင့်တိုင်း Soruce ကို အနုတ်ဗို့ရောက်စေအောင် ဖန်တီးထားတာပါ။ FET ရဲ့ Gate ငုတ်ကို တစက္ကန့်အတွင်းမှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အပိတ်အဖွင့်လုပ်ပေးတဲ့အတွက် SW ငုတ်မှာလဲ အနုတ်ဗို့ဟာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရောက်လိုက်မရောက်လိုက် ဖြစ်နေပါမယ်။ အဲဒီ SW ကို Coil ရဲ့ တစနဲ့ ဆက်ပေးထားပါတယ်။
6. IFB1 နဲ့ IFB2
VLED A ကတဆင့် ထုတ်ပေးတဲ့ အပေါင်းဗို့မြင့်ဟာ LED တွေကို တကယ်ဖြတ်စီးမစီး IC သိအောင် နောက်ပြန်ကျွေးထားတဲ့ Feedback လမ်းကြောင်းတွေပါ။ အကြောင်းတခုခုကြောင့် FB လမ်းကြောင်း ပြန်မရောက်ခဲ့ရင် OSC ကို ပိတ်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက် Switching မခုတ်တော့တာကြောင့် ဗို့မြင့်လဲ မထွက်နိုင်တော့ပါဘူး။
LED တွေမှာ ဖြတ်စီးနေတဲ့ လျှပ်စီးကြောင်းကို တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းဖို့အတွက် R တလုံးနဲ့ Ground ချထားပါတယ်။
OSC ပိုင်းနဲ့ VLED K အတွက် အနုတ်ဗို့ ပေးသွင်းလမ်းကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
IC ရဲ့ ငုတ်တွေအကြောင်း သိပြီဆိုရင် IC နဲ့ တွဲသုံးထားတဲ့ တခြား ကွန်ပို့နင့်လေးတွေအကြောင်း ဆက်ပြောပါ့မယ်။
1.Booster Coil (L1301)
DC volt ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်အောင် coil အတွင်းမှာ AC ဖြစ်အောင် အရင်ဖန်တီးရပါတယ်။ Coil တစ်စကို အပေါင်းဗို့ တိုက်ရိုက်ပေးထားပြီး ကျန်တစကို IC ရဲ့ SW ငုတ်ကတဆင့် အနုတ်ဗို့ ပေးသွင်းထားပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ဗို့ကို ကွိုင်အပတ်ရေနဲ့ တွက်ချက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အမ်ပီယာကိုတော့ ကွိုင်ကြိုးအရွယ်အစားနဲ့ တွက်ချက်ရပါတယ်။ အသုံးပြုချိန်သက်တမ်းကြာလာရင် ကွိုင်အတွင်းထဲက ကြိုးလေးတွေမှာ သုတ်ထားတဲ့ လျှပ်ကာဆေးရည်ကွာကျပြီး ကွိုင်အချင်းချင်း ရှော့ကျတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကို တန်းရှော့ (turn short) ဖြစ်တယ်လို့ ခေါ်ကြပြီး မူလပတ်ထားတဲ့အပတ်ရေထက် နည်းသွားတဲ့အတွက် ဗို့ထွက်လဲ နည်းသွားပါတယ်။ မီတာနဲ့ တိုင်းကြည့်ရင် အဆက်အသွယ်ပြနေပေမယ့် လိုအပ်တဲ့အပတ်ရေအတိုင်း ရှိနေမှသာ သတ်မှတ်ဗို့အတိုင်း ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်မှာပါ။
2. Rectifier Diode (D1301)
Coil ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ AC ကို DC ဖြစ်အောင်ပြောင်းဖို့ တာဝန်ယူပေးရပါတယ်။ Diode မှာ Anode နဲ့ Kathode အစွန်းနှစ်ဘက်ပါတဲ့အတွက် ဘက်မှားတတ်မိရင် ထွက်လာတဲ့ ဗို့လဲ မှားပါလိမ့်မယ်။ အရစ်အမှတ်အသား မပါတဲ့ဘက်ကို Anode လို့ခေါ်ပြီး Coil ဘက်မှာ တတ်ပေးရမှာပါ။ IC ကတဆင့် ထုတ်ပေးတဲ့ switch time ဟာ ကြိမ်နှုန်းမြင့်လွန်းတဲ့အတွက် ကြိမ်နှုန်းမြင့်ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ High Frequency Diode များကို တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ Diode ကို ဖြတ်စီးမယ့် volt ကလည်း ဗို့မြင့်ဖြစ်လို့ High Voltage Diode များကိုပဲ သုံးထားပါတယ်။ အဲဒီ Diode အစားထိုးမယ်ဆိုရင် ပုံစံတူ ခံနိုင်ရည်တူတဲ့ Diode များကိုပဲ အစားထိုးလို့ ရမှာပါ။
3. Filter Condenser (C1352) (C1356)
VBAT လမ်းကြောင်းမှာ Filter အဖြစ် အသုံးပြုဖို့ Condenser ထည့်ထားပါတယ်။ VBAT ဟာ 3.7 ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် 10V ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ C များကို အဲဒီလမ်းကြောင်းမှာ အသုံးပြုထားပါတယ်။ VLED A လမ်းကြောင်းမှာ သုံးထားတဲ့ C ကတော့ ဗို့မြင့်ဖြစ်တဲ့အတွက် 50V ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ C များကိုပဲ သုံးလို့ရပါတယ်။ VBAT Filter Condenser အစားထိုးချင်ရင် ပုံစံတူတာ အစားထိုးဖို့လွယ်ပေမယ့် VLED A လမ်းကြောင်းက C ကိုတော့ ခံနိုင်ရည်ဗို့တူတာကိုပဲ အစားထိုးမှ ရမှာပါ။
4. LB Coil (LB1301) (LB1304) (LB1305)
Backlight ပိုင်းဟာ သံလိုက်စက်ကွင်းကို အခြေခံတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်လို့ ထုတ်ပေးတဲ့ဗို့မြင့်မှာ သံလိုက်စက်ကွင်းတွေ ရောပါသွားပါတယ်။ အဲဒီ သံလိုက်စက်ကွင်းတွေက LCD ရဲ့ အရုပ်ပုံပိုင်းကို နှောင့်ယှက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် သူတို့ကို LB Coil လေးတွေနဲ့ စစ်ထုတ်ပေးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် LB Coil လေးတွေကို VLED A နဲ့ VLED K လမ်းကြောင်းတွေမှာ ထည့်ထားတာပါ။ တခါတလေ အဲဒီ Coil လေးတွေ ပြတ်တာ ပြုတ်တာ ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် ပုံစံတူရှိရင် အစားထိုးနိုင်ပြီး မရှိရင်လဲ ကြိုးဆက်သုံးလို့ ရပါတယ်။
နောက်တပိုင်းမှာ ပြစ်ချက်ရှာနည်းကို ဆက်ပြောပေးပါ့မယ်။
Previous Mobile Phone Backlight Part 1
Next Mobile Phone Backlight Part 3